Accueil > Gazetin'ny nosy > Toe-karena: Tompon’andraikitra amin’ny krizy i Rajaonarimampianina
Toe-karena: Tompon’andraikitra amin’ny krizy i Rajaonarimampianina
Manomboka miantraika any amin’ny fampidirana entana eto Madagasikara ny fisian’ny savorovoro pôlitika misy amin’izao fotoana izao. Ny lafiny fizahan-tany no voadona voalohany. Nihemotra hatrany amin’ny 62% ny isan’ny mpizaha tany tonga teo Madagasikara ankehitriny. Olana lehibe ny tsy filaminana ara-pôlitika ary manampy trotraka izany koa ny tsy fandriam-pahalemana.
Ny sehatra faharoa dia ny raharahan’ny ladoany eo amin’ny fanafaran’entana. Mpiasan’ny ladoany iray izay tafaresaka taminay no nitondra fanazavana fa nihena ny mpandraharaha mandefa entana aty Madagasikara hatramin’ny nisian’ny fihetsiketsehana pôlitika izao.
Tompon’andraikitra voalohany amin’izany ingahy filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Teo aloha ny mahakasika ny tsy fahaizany mitondra sy mitantana ny firenena ka nahatonga ny vahoaka nitaky ny fialany. Manaraka izany dia mbola olana koa ny tsy fetezany miala amin’ny toerana na dia efa izany avokoa no takian’ny vahoaka Malagasy manerana ny Nosy. Ny filazany fa ny fanarahana ny lalàna ihany no tokony harahan’ny vahoaka amin’ny fifandimbiasan-toerana amin’ny fitondrana. Raha toa nefa ka nanaraka ny Lalàmpanorenana araka ny voalaza ingahy Hery Rajaonarimampianina dia tsy nitranga izao olana izao. Toa ny mpitari-bato vilam-bava ihany ingahy filohampirenena ankehitriny noho izany. Rehefa sempotra ity filoha ity vao mahalala mampihatra lalàna ankehitriny. Efa kenda aho vao dony aho ranaotra, hoy ny oha-pitenenana.
Ao anatin’ny demôkrasia tanteraka koa ny fanesorana olona mpitondra tsy ao anatin’ny fifidianana. Ny fanehoan-kevitra an-dalam-be dia mazana mitarika amin’ny fialan’ny mpitondra manerana ny tany rehefa hita fa tsy voafehiny intsony ny fitantanana ny firenena. Izany no zava-misy eto Madagasikara ankehitriny ka tokony hahay handray izany ingahy filoham-pirenena.
RTF: “Tokony atsangana aloha ny teteza-miampita”
Mitohy foana ny fanehoan-kevitra avy amin’ireo antoko sy fikambanana pôlitika manoloana izao lalàn-tsarotra lalovan’ny firenena izao. Ny Rodoben’ny Malagasy tia Tanindrazana ho an’ny Fanorenana na ny RMTF indray no naneho ny heviny, omaly, ary nanolotra soson-kevitra hivoahana amin’izao krizy pôlitika izao. Vahaolana haroson’ity vovonana pôlitika iray ity ny tokony hananganana ny rafitra antsoina hoe “teteza-miampita ho fanarenana” fa tsy Tetezamita toy izay nisy teto amin’ny firenena hatramin’izay. Asa lehibe miandry an’io rafitra teteza-miampita io raha ny hevitra ny RMTF dia ny fanadiovana mahery vaika ny fitondram-panjakana amin’ny kolikoly sy ny fanararaotam-pahefana, famehezana ireo harem-pirenena, fametrahana ny fototra hanarenana ny firenena ara-panjakana, ny fametrahana Lalàmpanorenana sy lalàm-pifidianana vaovao, ny fanalàna ny fahantrana lalina sy ny tsy fandriam-pahalemana, ary ny fanavaozana ny fifandraisana amin’ny any ivelany ho fiarovana ny fahaleovan-tena sy ny fiandrianam-pirenena. Mbola manamafy hatrany moa ny RMTF fa tsy fanovàna olona no vahaolana ho an’ity firenena ity fa ny fanovàna rafitra amin’ny alalan’ny fanorenana ifotony. “Hatramin’izay dia rafi-piaraha-monina anjakan’ny tombotsoan’ireo vahiny sy ireo Malagasy vitsy an’isa sy tia kely no nisy teto Madagasikara. Fanjakana anjakan’ny kolikoly, fanararaotam-pahefana ary jadona. Mihamahantra hatrany ny vahoaka nitady fiovàna hanatsara ny fiaraha-monina ary mpitondra nisoloky vahoaka foana no tafapetraka teo amin’ny fitondràna”, hoy hatrany ny RMTF, tao anatin’ny fanambarana nataony.